Google Scrubbies ho an'ny iOS dia mamorona GIF mihetsika miaraka amin'ny fanampian'ny AI | Famoronana an-tserasera
Miverina indray izahay miaraka amin'ny fampiharana andrana iray hafa izay navoakan'i Google tato ho ato ary izany dia mitodika mivantana any amin'ny fantatsika hoe Artigence Intelligence na AI. Mampiasa milina fianarana na fianarana computational mba hitsitsiana fotoana amin'ny fizotran'ny fizotranao izay ahafahanao mandeha ho azy hahafahanay mifantoka bebe kokoa amin'ny famoronana fotsiny.
Ity rindrambaiko ity dia Scrubbies, ary raha tsy ho an'ny Android irery ny Storyboard, ianao irery no manana an'io ho an'ny iOS. Scrubbies dia fampiharana ahafahanao "manakorontana" ireo horonan-tsary tadiavinao toy ny hoe DJ amin'ny vinyl na mp3 amin'ny clubclub ianao. Io fahaizana manodinkodina ny hafainganana sy ny fitarihan'ny horonantsary io dia hahatratra vokatra mahafinaritra.
Mamela anao ny scrubbies manodinkodina mora foana ny lalana sy ny hafainganan'ny famerenana horonantsary mamokatra tadivavarana tsy manam-petra, izay afaka manasongadina hetsika, misarika tarehy mampihomehy ary mamerina fotoana vitsivitsy. Tsy mila maka horonantsary vaovao ianao na maka iray avy amin'ny galeriana anananao, ary ho afaka mamerina azy io toa ny manotra ianao.
Amin'ny rantsantanana iray no ahafahanao milalao ilay horonantsary, raha izany miaraka amin'ny roa dia azonao atao ny maka ny fananahana mba hamonjy azy na zarao amin'ny tambajotra. Ity dia fampiharana fanandramana izay milalao amin'ny horonan-tsary haneho traikefa tsy manam-paharoa ahafahantsika mamokatra atiny avo lenta izay azontsika zaraina amin'ny namana sy fianakaviana mba hahagaga azy ireo izany fotoana mampihomehy izany hoe afaka naka sary izahay tamin'ny fakantsary. ary ity app ity.
Tsy fantatray raha hianjera amin'ny Android koa ity fampiharana ity, noho izany ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny fiantraikany ka ny lehibe G dia manondro ny hitondra azy any amin'ny Google Play Store, toy ny mety hitranga amin'ny Storyboard, misy amin'izao fotoana izao amin'ny OS napetraka indrindra eto ambonin'ny planeta. Fahafahana mahatalanjona manao horonantsary fohy tsy manam-petra toa ny GIF mihetsika izy ireo ary amin'izany dia afaka gaga amin'ny olona ao amin'ny fianakaviana amin'ireo daty manan-danja ho an'ny maro isika.
Sintomy Scrubbies amin'ny iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Hosokosoko mba "hanakorotana" ny horonan-tsarinao: ny fampiharana Google vaovao miaraka amin'ny Art intelligence